Obbo Nigusuu Xilaahun: 'Caffeen Tigraay filannoo gaggeessuf murtiin dabarse heeraan ala' - BBC News Afaan Oromoo
Obbo Nigusuu Xilaahun: 'Caffeen Tigraay filannoo gaggeessuf murtiin dabarse heeraan ala'
13 Waxabajjii 2020
Madda suuraa, EDUARDO SOTERAS
Manni Maree Naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf murtiin dabarse heeraan ala jedhe mootummaan federaalaa.
Hogganaan Pirees Sekiretaariyaati Waajjira Ministira Muummee Obbo Nigusuu Xilaahun miidiyaa mootummaa Dhaabbata Pireesii Itoophiyaaf dubbii dubbataniin tarkaanfii mootummaan fudhatu himaniiru.
''Manni Maree Naanoo Tigraay filannoon haa gaggeeffamu jedhee murteessuun isaa heeraa kan cabsu waan ta'ef mootummaan murtee Boordii Filannoo kabajee ni raawwachiisa,'' jechuun himan.
Erga Ministirri Muummee Abiy Ahimad aangootti dhufanii waldhibdeen dhaaba kana dura olaantummaa qabu, Adda Bilisa Baasaa Ummata Tigraay (ABBUT), fi mootummaa federaalaa cimeera.
Guyyaa kaleessaa murtee kana dura Paartii naannicha bulchuun murtaa'e ture Manni Maree Naannoo Tigraay raggaasisuun ji'a muraasa keessa filannoon akka gaggeeffamu murtesseera.
Heerri Itoophiyaa keewwatni 102 ifatti filannoo raawwachiisuuf aangoo guutuu kan kennu Boordii Filannoo Biyyaalessaatiifi.
‘Paartilee mormituu waliin mariin itti fufa’ - MM Abiy Ahimad
Boordiin Filannoo Biyyaalessaa immoo kana dura filannoo sababa weerara koronaavaayirasiin filannoo gaggeessuu akka hin dandeenye ibsuun filannoon yeroo biraatti darbeera.
Ministirri Muummee Abiy Ahimad guyyaa kaleessaa fuula fesbuukii isaanii irratti ergaa dabarsaniin paartilen mormituu qophii filannoo taasifamu irratti mootummaa waliin akka hojjetan waamicha dhiheessaniiru.
Haa ta'u malee, dhimma naannoon tokko qofaatti filannoon gaggeessa jedhe irratti waan dubbatan hin qabani.
Obbo Nigusuun maal jedhan?
Murtee Naannoo Tigraay booda yaada isaanii kan ibsan Obbo Nigusuun ''Boordiin Filannoos aangoo heeraan qabun waan godhu ni godha amantaa jedhuun qaba,'' jechuun dubbataniiru.
''Kunis, Raayyaan Ittisa Biyyaa walaba ta'e akkuma birmadummaa biyyaafi heera akkuma kabachiisu aangoo Boordii Filannoof kennames hunduu kabajuu qaba,'' jechuun himan.
Kanaan ala, qaama aangoo boordichaa qaamni sarbu yoo jiraate mootummaan gidduu akka seenu himan.
''Qaamni mootummaa hojiifi aangoo boordii filannoo keessa seenuun yoo laaqe itti-gaafatama malee socho'uu waan ta'ef mootummaan murtee Boordii Filannoo ni kabaja, ni raawwatas,'' jechuun dubbatan.
Kana dura Boordiin Filannoo Biyyaalessaa olaantummaa mootummaa biyya bulchuun socho'aa ture jechuun paartileen mormituu yeroo hedduu himataa turan.
Erga MM Abiy aangootti dhufani as miseensi duraanii paartii mormituu Aadde Birtukaan Miidhaksaa akka hogganan ta'eera.
Kunis, garee falmitoota mirga namoomaa biratti MM Abiy Ahimad fudhatama guddaa akka argatan taasiseera.
Obbo Nigusuun 'seenaa Itoophiyaa keessatti boordiin filannoo walaba ta'e akka ta'e sosso'u hundaa'eera' jechuun mootummaan federaalaas ta'e naannoo aangoo boordichaa keessa seenuu hin danda'an jechuun dubbatan.
Obbo Nigusuun yeroo ammaa xiyyeeffannoon mootummaa weeraricha qolachuun alatti dhimmi Hidha Abbayyaa akka ta'e himan.
Boordiin filannoo maal hime?
Kana dura Koreen Hojii Raawwachiiftuu dhaaba Naannoo Tigraay bulchu sadarkaa naannootti filannoo gaggeessuuf 'qophiin akka eegalamu' yeroo murteesse Boordiin Filannoo adeemsa kana qeeqee ture.
''Mootummaan naannichaas ta'e paartiin naannicha bulchaa jiru filannoo gaggeessuun seera qabeessa hin ta'u,'' jechuun EBC'tti himanii turan Walitti qabduun boordichaa Aadde Birtukaan Miidhaksaa.
''Filannoo naannoo gaggeessuuf yaadanii yoo ta'e kuni adeemsa sirrii miti. Heera mootummaatinis kan deeggaramu hin ta'u,'' jedhan.
Qondaalli Paartii Badhaadhinaa Obboo Awwaluu Abdii amma dura yaada BBC'f kennanniin mootummaan naannoo Tigraay filannoo gaggeesuutti yoo seene "cal'isnee teenyee waan ilaallu hin ta'u" jedhanii turan.
Naannoon Tigraay filannoo akkamii gaggeessa?
Qondaaltonni naannichaa akka jedhanitti murtee Manni Maree naannichaa murteesse bu'uura godhachuun filannoo akka raawwachiisuuf Boordii Filannoo Biyyaalessaaf xalayaan gaafachuuf yaadaniiru.
Haa ta'u malee, murteen boordichaa kan kana duraarraa adda ta'a jedhamee hin yaadamu.
Hogganaa Biiroo Haqaa Naannoo Tigraay Obbo Amaanu'el Asaffaa turtii BBC waliin taasisaniin Boordii Filannoo malee naannichi filannoo gaggeessuuf akka yaade himan.
Aadde Keeriyaa Ibraahim maalif gadhiise jedhan?
Tigraay sadarkaa naannootti filannoo gaggeessuuf bu'uura seeraa qabaa?
''Yoo waamicha fudhatee dhufe filannoon ni taasifama. Yoo waamichaa kabaje hin dhufneefi deebii kennuuf yoo harkifata ta'e garuu naannichi qaama filannoo raawwachiisu hundeessee filannoo gaggeessuuf qophiidha,'' jedhan.
Haa ta'u malee, seera filannoos ta'e jaarmiyaan sadarkaa naannootti filannoo gaggeessu waan hin jirreef rakkisuu akka malu ifadha.
''Humna gaafata. Hamma humni danda'een itti deemuudha,'' jedhaniiru Obbo Abrahaam. Akka Obbo Abrahaamitti seera filannoo baasuu dabalatee naannichi qophii filannoo ni gaggeessa.
Ogeeyyiin seeraa adeemsi kuni heera biyyattiin ala akka ta'e himu. Sadarkaa heerri kaa'un filannoo haqa, bilisaafi amanamtummaa qabu gaggeessuuf ulaagaa guutuu dhabuu akka danda'u dubbatu.
Koronaavaayirasiin yaaddoo itti hin ta'u jedhamanii kan gaafataman Obbo Abrahaam of eeggannoodhaan akka raawwatu himu.
''Haala amma jiruun Koronaavaayirasiin filannoo hambisuuf sababa ta'u hin danda'u. Garuu of eeggannoo guddaa gochuun nurra jira,'' jechuun durumaa mootummaan filannoo gaggeessuuf fedhii hin qabu jechuun himataniiru.
Filannoon maaliif darbe?
Erga Ministirri Muummee Abiy Ahimad aangootti dhufani as filannoon yeroo duraaf baatii Hagayyaa keessa taasifamuuf yaadamee ture.
Yeroon suni boodarra ganna keessa yaadni jedhu waan ka'ef ji'uma sana keessa guyyoota muraasa akka achi siqu ta'e.
Kanuma keessa garuu ji'a sadii dura sadarkaa addunyaatti weerarri koronaavaayirasii biyya seennaan Boordiin Filannoo adeemsa qophii filannoo adeemsisuu akka hin dandeenye ibse.
Dhimma kana irratti kan mari'ate paarlaamaan Itoophiyaa yaada Boordiin Filannoo Biyyaalessaa dhiheesse raggaasisuun filannoon yeroo biraaf akka darbu ta'e.
MM Abiy Ahimad: ‘Yeroon dabalataa Manni Maree Federeeshinii kenne nageenya ummataafi’
Siyaasa Itoophiyaa: Caffeen naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf murteesse
Siyaasa Itoophiyaa: Tigraay sadarkaa naannootti filannoo gaggeessuuf bu'uura seeraa qabaa?
Lammiileen Itoophiyaa dorgommii 'Robotics' Chaayinaatti godhame injifatan